အရောင်ရင့်မှတ်တမ်း – ဧပြီ ၂၀၁၄ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanmar Gazette » အရောင်ရင့်မှတ်တမ်း – ဧပြီ ၂၀၁၄
အရောင်ရင့်မှတ်တမ်း – ဧပြီ ၂၀၁၄
Posted by kai on Apr 10, 2014 in Myanmar Gazette, News | 20 comments
နာဂရီအက္ခရာ (သက္ကတဘာသာ)၊ ကဒံဗအက္ခရာ (ပါဠိဘာသာ)၊ ပျူအက္ခရာ (ပျူဘာသာ)၊ မွန်အက္ခရာ (မွန်ဘာသာ)စတဲ့ ဘာသာလေးမျိုးနဲ့ ရေးသားထားတဲ့ ပေတောကျောင်းတိုက်အတွင်းမှာ တွေ့ရှိရတဲ့ ကျောက်စာနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဖိုရမ်ကို (၂၀၁၄)ခုနှစ် ဧပြီ(၇)ရက်က ရန်ကုန်မြို့ အမျိုးသားပြတိုက်မှာ ကျင်းပခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ အဲဒီဖိုရမ်မှာ ယဉ်ကျေးမှု ဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးသိန်းဆွေက တက်ရောက် အမှာစကား ပြောကြားခဲ့ပြီး ဖိုရမ်ကို တက်ရောက်လာတဲ့ ပညာရှင်များက ကျောက်စာပါ အက္ခရာတွေကို ဖလှယ်ကာ ဘာသာပြန်ဆိုမှုတွေကို အခြားကျောက်စာတွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ရှင်းလင်းခြင်း၊ ပျူကျောက်စာမျက်နှာကို ဖတ်ရှုလေ့လာ ဘာသာပြန်ဆိုခြင်း၊ ပေတောကျောင်း ကျောက်စာရဲ့ တောင်ဘက်မျက်နှာ အက္ခရာပုံ လေ့လာချက်တွေကို ရှင်းလင်းခြင်း စတာတွေကို ပညာရှင်များက အပြန်အလှန် ဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်းနဲ့ ဖိုရမ်ကို ရှေးဟောင်းသုတေသနနှင့် အမျိုးသားပြတိုက် ဦးစီးဌာနမှ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်နှင့် အငြိမ်းစား ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်တွေ၊ ပညာရှင်တွေ၊ သုတေသီတွေ ပြည်တွင်းမီဒီယာတွေ တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ မြစ်သားမြို့ ပေတောကျောင်းတိုက်မှာ တွေ့ရှိခဲ့တဲ့ ကျောက်စာဟာ ပျူဘာသာ-ပျူအက္ခရာ၊ မွန်ဘာသာ၊ သက္ကတဘာသာ၊ ကဒံဗအက္ခရာ၊ ပါဠိဘာသာစတဲ့ ဘာသာလေးမျိုး အက္ခရာလေးမျိုးနဲ့ ရေးထိုးထားတဲ့ ဗဇြာနိဘရဏဒေဝဿဘွဲ့ခံ စောလူးမင်းရဲ့ ဘုရားဂူအတွင်းမှာ ဌာပနာအဖြစ် ရွှေဆင်းတုနှစ်ဆူကို ထည့်သွင်းပူဇော်ခြင်း၊ ကျန်ဘုရားနှစ်ဆူကို ပြည်သူတွေဖူးမြော်ဖို့ ထားရှိခြင်း စတာတွေကို ရေးထိုးထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဘုရားမှာ ဆန်၊ စပါး၊ ရိက္ခာပေးဖို့အတွက်ကို လယ်ပယ် (၁၀၀)၊ နွား(၁၀)ရှဉ်း၊ စပါးတင်း(၁၀၀၀) သတ်မှတ်ပေးပို့ဖို့ရန် ဘုရင့်လယ်အဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့ကြောင်း ရေးထိုးတားတဲ့ ကျောက်စာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ အဆိုပါ ကျောက်စာကို သက္ကရာဇ်(၄၄၁)ခုနှစ် (ခရစ်နှစ်အေဒီ-၁၀၇၉ခုနှစ်မှာ) ရေးထိုးခဲ့တယ်လို့ သိရတယ်လို့ သတင်းရရှိပါသည်။
ရာဇကုမာရ်ကျောက်စာကို အရင်က..အစောဆုံးမြန်မာစာကို ပြတဲ့ကျောက်စာလို့ထင်ကြတယ်..။
နောက်တော့.. နိဗ္ဗာန်လက်ဆွဲချည်ရေ ဆိုတာလေးကပိုစောတယ်ပြောပြန်ရော..
( စောလူးမင်း ကျောက်စာကိုမြန်မာ သက္ကရာဇ် ၄၄၁ ခုနှစ်၊ အေဒီ ၁၀၈၁ မှာရေးထိ ုးခဲ ့ပြီး ရာဇကုမာရ် ကျောက်စာကိုအေဒီ ၁၁၁၂ တွင် ရေးထိ ုးခဲ ့ခြင်းဖြစ်သည်။)
(“ကျောက်စာမှာ မြန်မာသက္ကရာဇ် ၄၂၅ (ခရစ်သက္ကရာဇ် ၁၀၅၂ အေဒီ) လို့ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြထားတာတွေ့တယ်။ )
(အဆိုပါ ကျောက်စာကို သက္ကရာဇ်(၄၄၁)ခုနှစ် (ခရစ်နှစ်အေဒီ-၁၀၇၉ခုနှစ်မှာ)
ရေးထိုးခဲ့တယ်လို့ သိရတယ်လို့ သတင်းရရှိပါသည်။)
… မြန်မာပိဋကတ်၃ပုံက.. ဘုရားဟောအတိုင်းအမှန်ဆုံး..ဆိုသတဲ့..။
အိုဘယ့်.. မြန်မာများ.. :buu:
အပေါ်က Skynet ရယ် ၃ခုကလွှဲနေသဗျ…
သမိုင်းတွေ ရှေးဟောင်းဘာသာရပ်တွေ ဝေးလို့ ကျန်တာတော့ မပြောလိုပါဘူးဗျာ။
ဘယ်မှ ထွက် မကြည့်ပဲ
လူမျိုး ဘာသာ မှာ င
ါ တကော ကောပြီး မာန်တက်နေတာလေးတွေပဲ
အစွဲလေးတွေ ကြာရင် ချွတ်မရမှာ စိုးရတာ။
ငါဟဲ့ မြန်မာ ဆိုပြီး ကိုယ့်နောက် ဘယ်သူမှ မရှိတော့တာသိမှ ရှက်ရတာ။ :opps:
(က) ထိပ်ဆုံးတွင် ရှစ်ကြောင်း ၊ (ခ) အလယ်တွင် ၁၃ ကြောင်း နှင့် (ဂ) အောက်ဆုံးတွင် ခုနှစ်ကြောင်း ပါရှိရာ ထိပ်ဆုံး ရှစ်ကြောင်းသည် မြန်မာစာ ဖြစ်ဖွယ်ရှိပြီး ရေးသား ထားသော အက္ခရာမှာ မွန်မြန်မာ အက္ခရာ ဖြစ်သည်။ ထိုစာပိုဒ်၏ ငါးကြောင်းမြောက် တွင် သက္ကရာဇ် ၄၁၅ ဟု ပါရှိသည်။ ဦးကုလား ရာဇဝင်ပါ စောလူးမင်း နန်းစံနှစ် ( ၃၉ရ – ၄၂၃ ) နှင့် ကိုက်ညီမှု ရှိသည်။
မြန်မာသက္ကရာဇ် ၄၁၅ အမှန်.. (မြန်မာ့အသံ၊ မြဝတီ၊ အီလဲဗဲင်း)
ဆိုတော့.. ခရစ်နှစ် ၁၀၅၃ကအမှန်…။
မြစေတီကျောက်စာ.. အေဒီ၁၁၁၃။ မြန်မာ ၄၇၅
စေလူးမင်းကျောက်စာ.. အေဒီ ၁၀၅၃၊ မြန်မာ ၄၁၅
ဧပြီ(၂)ရက်အထိ အိမ်ထောင်စု (၄) သန်း (၆) သန်းကျော် သန်းခေါင်စာရင်း ကောက်ယူ ပြီးစီးတဲ့ သတင်း
(၂၀၁၄) ခုနှစ် လူဦးရေနဲ့ အိမ်အကြောင်းအရာ သန်းခေါင်စာရင်း ကောက်ယူမှုကို မတ်(၃၀)ကနေ စတင်ကောက်ယူရာမှာ ဧပြီလ (၂) ရက်နေ့အထိ ကောက်ယူပြီးစီးမှုဟာ အိမ်ထောင်စု(၄၆၈၂၀၉၆)စု ကောက်ယူ ပြီးစီးခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ အဆိုပါ ကောက်ယူပြီးစီးတဲ့ အခြေအနေကတော့ ကချင်ပြည်နယ်မှာ အိမ်ထောင်စုပေါင်း (၁၀၅၆၄၈)စု၊ ကယားပြည်နယ်မှာ (၂၀၀၀၂)စု၊ ကရင်ပြည်နယ်မှာ (၁၃၁၆၇၃)စု၊ ချင်းပြည်နယ်မှာ (၃၄၀၉၉)စု၊ စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီးမှာ (၅၀၄၁၆၂)စု၊ တနင်္သာရီတိုင်း ဒေသကြီးမှာ (၁၃၀၆၈၀)စု၊ ပဲခူးတိုင်း ဒေသကြီးမှာ (၅၃၈၈၇၃)စုနဲ့ မကွေးတိုင်း ဒေသကြီးမှာ (၃၈၅၂၉၉)စုကို ကောက်ယူပြီးစီးခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီးမှာ (၅၇၀၈၅၁)စု၊ မွန်ပြည်နယ်မှာ (၁၈၅၄၂၁)စု၊ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ (၁၈၇၄၇၈)စု၊ ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးမှာ (၇၁၂၇၄၉)စု၊ ရှမ်းပြည်နယ်မှာ (၄၃၁၂၅၃)စု၊ ဧရာဝတီတိုင်း ဒေသကြီးမှာ (၆၃၂၆၅၀)စုနဲ့ နေပြည်တော် ကောင်စီနယ်မြေမှာ (၁၀၉၂၅၉)စုကို ကောက်ယူပြီးစီးခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ နိုင်ငံတစ်ဝန်း သန်းခေါင်စာရင်း ကောက်ယူရာမှာ မိုင်းလားအထူးဒေသကို စာရင်းကောက်ယူမှု ပြီးစီးခဲ့ပြီး (၀)အထူးဒေသကို ကောက်ယူနေဆဲဖြစ်ကာ (KNU)တပ်မဟာ (၂)နဲ့ တပ်မဟာ(၅) နယ်မြေတွေမှာ တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကို စာရင်းကောက် သင်တန်းပေး ကောက်ယူစေလျက် ရှိနေတယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။ သန်းခေါင်စာရင်း ကောက်ယူ မေးမြန်းဖြည့်စွက်မှုမှာ အိမ်ထောင်စုတစ်စုကို ပျမ်းမျှမိနစ်(၂၀)ခန့် ကြာမြင့်ပြီး စာရင်းကောက်တွေအနေနဲ့ တစ်ရက်ကို အိမ်ထောင်စု(၁၀)စုကနေ (၁၂)စုအထိ ကောက်ယူပြီးစီးတယ်လို့ သိရကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်
ကျောက်စာ ဆိုလို ့…
မန်းလေးက.ကျောက်စာတွေအများကြီး ရှိတဲ့စေတီကို..လွမ်းသွားပြီ….
By Geoff Gaherty , Starry Night Education, Space.com
This NASA graphic shows where the total lunar eclipse of April 14-15, 2014 will be visible from. The lunar eclipse coincides with April’s full moon and is the first of four total lunar eclipes between April 2014 and September 2015. (Credit: NASA | JPL-Caltech)
This NASA graphic shows where the total lunar eclipse of April 14-15, 2014 will be visible from. The lunar eclipse coincides with April’s full moon and is the first of four total lunar eclipes (a tetrad) between April 2014 and September 2015. Credit: NASA | JPL-Caltech
MSN Weather: Lunar eclipse leaves NASA probe in the dark
A lunar eclipse is something quite different. It occurs when the moon passes through the Earth’s shadow.The Earth’s shadow consists of two parts:adark inner core called the “umbra,” andalighter outer part called the “penumbra.” Rather than being truly dark, the inner shadow is usually tinted orange or red by light passing through the ring of atmosphere surrounding the Earth.
NASA graphic (NASA graphic)
This NASA graphic depicts the position of the moon in Earth’s shadow during the total lunar eclipse of April 15, 2014 at3a.m. ET. It is the first of four consecutive total lunar eclipses,atetrad, between April 2015 and September 2015.
This article was provided to Space.com by Simulation Curriculum, the leader in space science curriculum solutions and the makers of Starry Night and SkySafari. Follow Starry Night on Twitter @StarryNightEdu. Follow us @Spacedotcom, Facebook and Google+.
Lausanne/Switzerland, 1 April 2014 – Impact Economy announced today the launch of the Burmese Edition of “Sustainable Apparel Value Chains: A Primer on Industry Transformation.” The Primer analyzes the competitiveness and sustainability issues facing the USD3trillion (and counting) global textile and garment industry.
ဘုရားခေတ်လောက်က မြေပုံလို့ဆိုတာပဲ..။ အခုခေတ်မှာ စိတ်မှန်း.. ကိုးကားဆွဲပုံရပါတယ်..။
ဒီစကားကို ကိုမျိုးချစ်ကြီးများ မကြားပါစေနဲ့။
ZDNet	– ‎21 minutes ago‎
မြန်မာလူမျိုးဆိုတာက.. မှတ်တမ်းတင်တာ.. ပြန်ကူးရေးတာ.. အင်မတန်ချာတယ်..။ ချာတယ်ဆိုတာထက်.. သောက်တလွဲကြီးပဲလို့တောင်.. ပြောလို့ရသဗျ..။ ခုနှစ်သက္ကရာဇ် တွေဆို.. လေးသင်္ချေကမ္ဘာတသိန်း.. ဘာညာတွေ.. ပါးစပ်ထဲရှိတာ.. လျှောက်ပြောတတ်တာမျိုး..။
၂၀၁၃က.. မြစ်သားမြို့မှာတွေ့တဲ့.. စောလူမင်းကျောက်စာဆိုတာကြီးမှာ.. ကျောက်ပြားပေါ် ကျောက်စာကြီးထွင်းထားရက်နဲ့.. အဲဒါကို.. မဇ္ဇျိမသတင်းစာ(အေဒီ ၁၁၁၂ )၊ ဧရာဝတီသတင်း(ခရစ်သက္ကရာဇ် ၁၀၅၂ အေဒီ)။ စကိုင်းနက်သတင်း(ခရစ်နှစ်အေဒီ-၁၀၇၉ခုနှစ်)။ မြဝတီသတင်း၊ BBC ( မြန်မာသက္ကရာဇ် ၄၁၅ )။ DVB, မြန်မာတိုင်းမ် (မြန်မာသက္ကရာဇ် ၄၄၁ ) စတဲ့ ဧရာမမီဒီယာကြီးတွေပြန်ရေးတာ.. ဌာန၅မျိုး.. ကိန်းဂဏန်း၅မျိုးထွက်သဗျ..။
နှစ် ၂၅၀၀, နှစ် ၁၀၀၀, နှစ် ၅၀၀, နှစ်၁၀၀ နဲ့.. ၁၀နှစ်ကွာတာမဟုတ်ဖူးနော..။ သတင်းယူးကြတာ.. နာရီပိုင်းလေးကွာတဲ့.. . သက်သေအထောက်အထားခိုင်ခိုင်လုံလုံကြီးကို.. အဲလိုဖြစ်ကြတာ…။
မြန်မာဘာသာနဲ့ရေးထားရင်.. ချင့်ယုံ… ၅၀% ပဲအမှန်ထားယုံ.. လို့..။